Abaabulka Mudoharaad Oo Ka Socda Magaalada Wajaale Iyo Doorka Ay Ku Leeyihiin Xubno Kamid ah Gudida Ganacsatada +Saamaynta Amni Ee Ganacsiga Wajaale.
Wednesday February 12, 2020 - 00:15:23 in Wararka by Super Admin
Qaarkamid ah shacabka ku dhaqan Magaalo ganacsiyeedka tog wajaale oo ay hormuud ka Ahaayeen xubno kamid gudida ganacsatada magaalada tog wajaale ayaa maanta sameeyay isku soobax ay sheegeen in kaga soo horjeedaan dhulka xabaalaha magaalada oo ay iibiyeen maamulka magaaladu.
Sidoo kale Maamulka Degmada tog wajaale ayaa isla maanta Beeninyay wararkaasi iyagoo sheegay in aanay jirin dhul la iibiyay cidii warkaasi sheegaytayna looga baahan yahay cadayntiisa.
Arinta ayaa magaalo ganacsiyeedka tog wajaale ka abuuray dareeno kala duwan.
Dhanka kale wararka laga helayo caawa magaalada tog wajaale ayaa sheegaya in xubno kamid ah gudida ganacsatada wajaale ay abaabulayaan mudoharaad maalinta bari ah lafilayo in uu dhacdo magaalada wajaale kaasi oo aan la garayn sobobta keentay Iyo ujeedada ka danbaysa ee ay ka lee layihiin xubnaha gudida ganacstada ee ku hawlan Abaabulkiisa Iyadoo Magaalada Tog wajaale ay ku Taalo Xuduuda Somaliland Iyo Itoobiya.
Abaabulka Mudohaaradkani ayaa laga dareemaya Gudaha magaalad iyo baraha ay ku kulanto bulshadu, taasi oo laga cabsi qabo khatarta uu ku keenayo magaalada. Hadii uu ka dhaco iyada oo aan la saadaalin Karin saamaynta uu ku yeelanayo ganacsiga magaalada wajaale oo wakhtigani xawli ah islamarkaana ay dalka aynu jaarka nahay ee itoobiya ay maalin walba kasoo gudbaan kumanaan ganacsato ah oo somaliland ka iibisada alaabo lacagtoodu ay gaadhayso balaayiin dollar.
Xubnaha ganacsatada ah ee ku hawlan abaabulka mudoharaadkani ayaa la sheegay in ay kasoo horjeeda xukuumada somaliland taasi oo aan la garanayn danaha qarsoon ee ay ka wataan iyo in ay diyaar uyihiin masuuliyada Wixii khasaare nafeed iyo mid hantiyeed ee ka dhasha.
Shacabka ku ganacsada magaalada wajaale oo ka dareen celiyay abaabulka mudoharaadkani ayaa sheegay in magaalada wajaale aanay qaadi Karin mudoharaad rabshado wata iyaga oo ka digay in lagu soo dhex dhuuman karo taasi oo dhaawac culus ku keenaysa samcada magaalada wajaale iyo isku socodka labada dale e somaliland iyo itoobiya.
Gudida ganacsatada wajaale ayaa iyagu wakhtigan umuuqdo kuwo dano kale uga faa,iidaysanaya shacabka magaalada oo warar aan lahubin lagu abaabulo iyadoo xubnahan abaabulaya shacabku ay awood uleeyihiin in maamulka degmada ay kala hadli karaan waxa khaldan iyo xaqiiqada in la iibiyay dhulka xabaalaha, wallow xogaha qaar tibaaxayaan in ujeedada ay leeyihiin xubnaha gudidada ganacsatu ay ka fog tahay wararka shacabka lagu jaho wareerinayo islamarkaana uu damacoodu salka ku hayo mid dhinaca xukuumada madaxwayne biixi ku jahaysan kaasi oo wakhtigan aanay la lahayd xidhiidh toosa halka xukuumadii axmed siilaanyo ay ku xidhnaayeen madaxtooyada oo ay hadba cida ay iyagu ogolyihiin ay ucumaadadi jireen xilka maamulka degmada balse wakhtigan ay go,doon ka yihiin
Gudida ganacsatada ee xiligan abaabulaya mudoharaadka ayaa qaada cashuur aan dalka ka jirin taasi oo ay ka qaadaan gaadiidka rar uqaada itoobiya islamarkaana ay sitoosa ugu dhaco jeebkooda taasi oo ah lacag adag islamarkaana aanay jirin kala xisaabtanta waxa ay ku qabtaanba.
Sikastaba ha ahaatee magaalo ganacsiyeedka tog wajaale ayaa iyagu ah magaalo qaadi Karin rabshado iyo abaabul shacab taasi oo hadii ay ka dhacdo ku keenaysa dhaawac balaadhan isku socodka labada dalka iyo kala iibsiga alaabaha kala duwan ee shaaracyada magaalada daadsan.
Waxaana laga war sugi doonaa talaabada ay xukuumada iyo ciidamada kala duwani ka qaadan cidkasta oo isku dayda In ay khal khal galiso amaanka magaalo ganacsiyeedka tog wajaale.